Izixhobo zokuqaphela i-typography | Abadali be-Intanethi
UMary Rose | | Imithombo
Ukuchonga ifonti ngeliso lenyama kunokuba ngumsebenzi onzima kakhulu. Ewe, ubuso bochwethezo ngalunye bunobunzima obahlukeneyo, ukugqiba kunye neemilo ezahlukeneyo, kwaye akunakwenzeka ukuba uziqaphele zonke. Kangangeminyaka le ngxaki iye yasonjululwa ngokudalwa kwezixhobo ze-intanethi ezenza lo msebenzi ukhawuleze kakhulu. Ezi zixhobo zidalwe ukuchonga iifonti ngemifanekiso, imibuzo kunye nee-URL.
Ngeli xesha sikuphathele uluhlu lwezixhobo zokuqaphela i-typography. Ngubani owaziyo, mhlawumbi awukwazi ukufumana lowo ubumfuna kodwa ufumana ezinye ezinokuba ngcono kwiprojekthi yakho.
1 Izixhobo zokuqaphela i-typography
1.1 Yintoni ifonti
1.6 Ifonti yeNinja
1.7 Isilinganisi sefonti
1.8 Imigca ye Google
Senze ukhetho lwe Izixhobo ezi-8 ezikwi-intanethi eziya kukunceda uchonge kwaye uqaphele ezi fonti ukuba xa uthi krwada akulula ukuyiqonda. Ngezantsi sizikhankanya kwaye sichaze ngakumbi kancinci malunga nabo.
Yintoni iFonti yenye yezona zixhobo zaziwayo zewebhu zokuyiqaphela. Imalunga ne-a Injini yokukhangela yefonti ngemifanekiso, Ewe, kufuneka ulayishe umfanekiso kunye netypography ofuna ukuyichonga. Nje ukuba iphepha lewebhu lilayishe umfanekiso, liya kukubonisa uthotho lweziphumo ezifanayo nohlobo lochwethezo olulayishile. Ukuba awukasifumani isiphumo obusilindele, rhoqo Ungabonisana namathandabuzo okanye izimvo zakho nabanye abasebenzisi bewebhusayithi.
I-Bowfin Printworks yinkonzo yoyilo loyilo lwefonti ekhethekileyo kwiimveliso zokubhala zesiko, ukuchongwa komthombo kunye nereferensi yokukhangela umthombo we-intanethi. Inika ulwazi oluninzi, onokufunda ngalo malunga nokubhala. Isixhobo siya kukubuza uthotho lwemibuzo malunga nohlobo lochwethezo ukuze inkqubo iyichonge. Yonke imibuzo yenziwa kwiphepha elinye. Kwalo mnini wephepha lewebhu uphendula nge-imeyile ukuba unawo nawaphi na amathandabuzo xa uchonga i-typeface.
Njengokuthi yintoni iFonti, le webhusayithi isebenza ngokufaka umfanekiso ngefonti ofuna ukuyichonga. Sebenzisa ikhathalogu yeefonti ezingaphezu kwe-850000, zombini zorhwebo kunye nesimahla, ikwane-AI yokukhangela ifonti. Kuwo wonke umfanekiso owufakayo kwiwebhusayithi yabo, baya kukubonisa imithombo engaphezu kwama-60. Into yokuqala ekufuneka uyenzile kukulayisha umfanekiso ococekileyo wombhalo oqulathe ifonti ofuna ukuyichonga.
Isixhobo sisebenzisa i-AI, inkqubo yokufumana i-typography kwi-90% yamatyala. I-10% eseleyo ibangelwa yimifanekiso engekho semgangathweni, oko kukuthi, ngesisombululo esiphantsi, isicatshulwa esigqwethekileyo, njl. Into abayenzayo kukwahlula ngokuzenzekelayo oonobumba baze bakubonise iifonti ezifana kakhulu nomfanekiso owufakileyo, baya kukubonisa amakhonkco kumaphepha apho zifunyenwe khona ezo fonti, nokuba uzithenge okanye uzikhuphele.
I-Identifont yaphehlelelwa ngoNovemba ka-2000. Eli phepha lenzelwe ukubonelela abaqulunqi ngesixhobo sokuchonga iifonti okanye ukukhetha iifonti ezifanelekileyo kwiiprojekthi zabo. Ibe yenye yezona nkcukacha zinkulu ezizimeleyo zemithombo yedijithali kwi-intanethi. Indlela yokuchonga ifonti iyafana naleyo isetyenziswa yiPrintWorks Bowfin, kuba inokhetho lwe. chonga umthombo Ingaba ufuna ntoni mediante imibuzo, nangona unokhetho lwe Chonga umthombo ngemifanekiso okanye izinto ezifanayo.
Le webhusayithi ikunika ithuba lokuba Khangela iifonti usebenzisa imifanekiso. Ikwabonelela ngeefonti ezingaphezu kwe-130 zokukhuphela mahala. Njengamanye amaphepha ewebhu, ikunika uluhlu lwamagama afana kakhulu nalawo ayifunayo, nokuba asimahla okanye ahlawulwe.
Yiyo ulwandiso lwegoogle chrome, enceda ukuchonga imithombo yayo nayiphi na iwebhusayithi. Nje ukuba uyifakile, konke omawukwenze kukushukuma phezu kombhalo ofuna ukuwuchonga, kwaye uya kuba nakho ukufumana igama lomgca kunye neempawu zeCSS. Iya kukubonisa isishwankathelo sazo zonke iifonti ezisetyenziswa kuloo webhusayithi. Yintoni egqithisile Iya kukunika ulwazi lobugcisa malunga nolo hlobo lohlobo, olufana nesikali kunye nobukhulu.
Esi sixhobo simela itekhnoloji yaso enamandla kunye neempawu ezifihliweyo, kwaye ikuvumela ukuba utshatise iimpawu ze-OpenType. Inophawu lokucoca ithegi ekuvumela ukuba uqhube phantsi kwimithombo ekungelula ukuyifumana.. Ungalayisha umfanekiso okanye ukope i-URL, isixhobo siya kukubonisa ezona zifana kakhulu nomthombo owulayishile.
Kwikhathalogu esebenzisanayo, ungafumana iyonke 923 iintsapho iifonti simahla kunye simahla ukusetyenziswa. Unokuzisebenzisa nakweliphi na iphepha lewebhu, usetyenziso lweselula, uyilo, njl. Iifonti zingumthombo ovulekileyo kunye nomgangatho ophezulu. Ine-injini yokukhangela enentaphane yeenketho zokufumana ifonti oyifunayo. Kwakhona ikuvumela ukuba uchonge umthombo, kwaye udibanise imifuziselo emininzi ukufumana emitsha.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izibonelelo » Imithombo » Izixhobo zokuqaphela i-typography
Umfanekiso webhodi yeebhilibhodi